China Tube Shields စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Xingtejia
သံမဏိ Tube Shield ကို, ကြိုးဆွဲကြိုး
၁ ။ လုပ်ငန်းစဉ်: ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် Casting
၂ ။ ပစ္စည်း: SS310S, SS309S, SS304, SS321 နှင့်စသည်တို့ကို
ပြွန်ဒိုင်းများကိုအဓိကအားဖြင့်အပူပေးမျက်နှာပြင်ပိုက်ကဲ့သို့သောအပူပေးစက်၊ အပူပေးစက်၊ ဘောဂဗေဒ၏စီးပွားရေးနှင့်ရေနံရံစသည့်ပိုက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်ဘွိုင်လာပိုက်၏လေမျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ရန်၊ လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ပိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းမျက်နှာပြင်အပူချိန်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်း pipe.Tube Shield သည်ဘွိုင်လာအတွက်အထူးဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုများသောအားဖြင့် power station ဘွိုင်လာတွင်အသုံးပြုသော်လည်းအနည်းငယ်သောဘွိုင်လာများတွင်အသုံးပြုသည်၊ အချို့ကျောက်မီးသွေးဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
ပြွန်ဒိုင်း၏သက်တမ်းသည်ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 310S ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်သောပြွန်ဒိုင်းများသည်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ ပြွန်ဒိုင်းလွှား၏ပုံမှန်သက်တမ်းသည်စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းသံသရာ (၃-၅ နှစ်) ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘွိုင်လာကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်အခါတိုင်းအချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ထပ်ထည့်လိမ့်မည်။ အစားထိုးခံရဖို့အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုအလေးအနက်ဝတ်ဆင်, ပါးလွှာခြင်းနှင့်စံကျော်လွန်ပြီးသောသူတို့သည်ဖြစ်ကြ၏။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်မီးမဟုတ်သောကြောင့်လည်းဘွိုင်လာ၏လည်ပတ်မှုတွင်ပြုတ်ကျသွားသည်။ အစားထိုးနေစဉ်အတွင်း, anti-wear pad ၏ wear အခြေအနေနှင့်အညီ, ပါးလွှာလေးနက်လျှင်, သူကပုံပျက်သောလေးနက်သည်နှင့်ပိုက်ကိုကာကွယ်မပေးနိုင်ပါက, အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အချို့သောဘွိုင်လာပြွန်များသည် anti-wear pads တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းဘွိုင်လာကိုပုံမှန်စစ်ဆေးသည့်အခါပြွန်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြွန်များထပ်မံ ၀ တ်လာခြင်းကိုတားဆီးရန်နှင့်ဘွိုင်လာပြွန်ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် anti-wear pads ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားသည်။
Straight And U-type ခံနိုင်ရည်ရှိသောဒိုင်းများကိုသွန်းလောင်းပါ
ဘိလပ်မြေနှင့်ဖိအားပေးစက်နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသော anti-wear shields များသည်ဘွိုင်လာပိုက်များကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ဖိအားစက်ပြွန်ဒိုင်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နည်းပြီးထုတ်လုပ်မှုသံသရာတိုသည်။ အဆိုပါသွန်းပြွန်ဒိုင်းပိုကောင်း wear ခုခံရှိသည်။
ရှေ့သို့ Cast Alloy Guide Rollers၊ လက်စွပ် / ဘီးများသွန်းသည်
အပူခံနိုင်သောသတ္တုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားသောခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ်အရေအတွက်ရှိသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်များပြုလုပ်ထားသည့်သတ္တုများသည်အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်များတွင်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ထိတွေ့နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုများမှအကျိုးရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင်စွမ်းအင်၊ အင်ဂျင်၊ မီးဖို / မီးဖိုနှင့်ရေနံဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိသတ္တုများပုံသွန်း ...
ဆန်ခါ & ကွင်းဆက်ဆန်ခါ & pl ဝတ်ဆင် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်များစွာသောလုံးလေးများလုံးကိုအပင်များထောက်ပံ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်စက်ကိရိယာများသည်အလွန်ရင့်ကျက်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖောက်သည်တိုင်ကြားချက်များလုံးဝနီးပါးမရှိခဲ့ပါ။ သင်၌လိုအပ်ချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုငါပေးမည်။ ဤအပိုင်းများ၌ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောပစ္စည်းများသည်များသောအားဖြင့်အပူခံနိုင်သောသံမဏိများဖြစ်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အသုံးပြုထားသောခွန်အားနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လယ်ကွင်းများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
Cast Alloy Guide Rollers၊ လက်စွပ် / ဘီးများသွန်းသည်
Guide roller သည်မြန်နှုန်းမြင့်ဝါယာကြိုးစက်၏အဓိကစားသုံးမှုကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသော wear ခံနိုင်မှု၊ သံမဏိကပ်ခြင်းနှင့်အပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံနိုင်မှုတို့လိုအပ်သည်။ သာမန် austenitic အပူခံနိုင်သောသံမဏိ၊ martensite ၀ တ်ဆင်ထားသောခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်သံမဏိလမ်းညွှန် roller သည်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ သူတို့၏လုပ်ငန်းသက်တမ်းမှာတိုတောင်းသောကြောင့်စက်၏လည်ပတ်မှုနှုန်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ...
CRUSHER LINERS Ball Mill Liners
1. သတ္တုများသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: ဗဓေလသစ်သဲမှိုသွန်းလောင်းခြင်းသို့မဟုတ် Shell မှိုတိကျသောသတ္တုများပုံသွင်းခြင်း 2. ပစ္စည်း - ASMT A 128 manganese, ASTM A 532 ခရူသံဖြူနှင့် fused chrome အဖြူရောင်သံ ၃။ သွန်းမှု၏အရွယ်အစားသည်းခံစိတ် - DIN EN ISO 8062-3 grade DCTG8 -10 4. သွန်းခြင်း၏ဂျီ om မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ISO 8062 - တန်း GCTG 5-8 XTJ သည်သွန်းလောင်းရာတွင်အဓိက ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီးအိုအက်စ်မှထုတ်လုပ်သောအ ၀ တ်အထည်များကို ...
အပူကုသမှုဗန်းများ / တောင်းများ၊
XTJ သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၁။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမီးဖိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် Base Trays, Intermediate Grids, Baskets စသဖြင့်စံသတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန်များ၊ ၂ ။ စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် - ၁။ ဖောက်သည်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအမြင့်ဆုံးတင်ရန်။ ၂။ လ်တာ၏အလေးချိန်ကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချရန်။
သံမဏိဆန်ခါတုံးများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအီး ...
1. Casting လုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း 2. သံမဏိအဆင့် - GX130CrSi29 (1.4777) (သင့်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်) 3. သွန်း၏အရွယ်အစားသည်းခံစိတ်: DIN EN ISO 8062-3 တန်း DCTG8 4. သွန်း၏ဂျီ etr မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ISO 8062 - တန်း GCTG5၅။ အသုံးပြုခြင်း။ စွမ်းအင်လောင်ကျွမ်းသောစက်ရုံများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း။ အမှိုက်သရိုက်များသည်ယခုအခါအလွန်လေးနက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်မှအမှိုက်သည် t ဖြစ်သည်။